In ka badan 4,000 oo qaxooti Itoobiyaan ah oo u soo talaabay x... | Universal Somali TV
In ka badan 4,000 oo qaxooti Itoobiyaan ah oo u soo talaabay xadka Kenya.
Ururka Laanqeyrta Cas ee Kenya ayaa sheegay in tirada dadka qaxootiga ah ee ka yimid Itoobiya ay sii kordhayaan iyada oo qoysas badani ay magan-galiyo usoo raadsadeen degmada Mooyaale, ee deegaanka Marsabit.
Ilaa Talaadadii, la soo dhaafay qiyaastii 5,000 oo qaxooti ah ayaa yimid Mooyaale, inta badanna waxay ahaayeen haween iyo carruur. Kuwaas oo ay ka mid ahaayeen hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, dadka jirran iyo waayeelka.
Qaxootiga ayaa inta badan ku soo qaxaya magaalooyinka Moyale iyo Sololo, kuwa oo isugu jira bulshooyinka kasoo jeeda qabaa'ilada Butiye (500 qof), Somare (400 qof), Cifa (100 qof), Sessi (1,000 qof), Gatta Korma (1,650), Dambala Fachana (750 qof) iyo Kukub Maeyi (600).
Tani ayaa daba socotay qiimeyn la sameeyay 12-kii Maarso, 2018 kaddib markii la sameeyay guddi-hoosaad Deegaanka ah oo shaqadoodu tahay inay soo aqoonsadaan tirada qaxootiga ee Mooyaale iyo baahiyahooda degdegga ah.
Kan-xigaErdogan:Ciidamada Turkiga kama bixi d...
Kan-horeMaxkamadda ku taala dalka Kenya oo xa...
39,262,920 unique visits